Cabanga Ukuvuselelwa Kwezokuxhumana Kwe-Core Truck Technology ye-NEP Belgium - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » Cabanga Ezokuxhumana Zivuselela Ubuchwepheshe beCore Truck be-NEP Belgium
Cabanga Ezokuxhumana Zivuselela Ubuchwepheshe beCore Truck be-NEP Belgium
Ukulungiswa kabusha kwamaloli amakhulu sekuphele amasonto amahlanu kuphela umgwaqo
IMNYANGO, 5 Novemba 2019 - Cabanga Ukuxhumana wethule ubuchwepheshe obukhulu bokuvuselela okukhulu iloli lokusakaza elingaphandle le-NEP Belgium. Futhi ukuhlinzeka ngezixazululo zezwe nobuso obufakazelwa yisikhathi esizayo, ingxenye ebalulekile yale nselelo kwakuyisikhathi esibukhali kakhulu esabelwe ukuqeda ukulungisa kabusha. Cabanga Ukuxhumana ikwazile ukuletha ngesikhathi esinzima ngokuxhaswa komthengisi wayo waseBelgium nomlingani wakhe, i-VP Media Solutions.
"IYunithi yethu i-14 ibisenamakhilomitha amaningi kuyo, kepha isiteji sobuchwepheshe besiphelelwe isikhathi," kusho uGeert Thoelen, umphathi wezinguquko ku-NEP Belgium. “Besifuna isixazululo esingahle singene esikhaleni esikhona, singasinikeza konke ukusebenza esikudingayo namuhla, futhi silungele ikusasa, okubandakanya ukusetshenziswa okwandayo kokuxhuma kwe-IP. Futhi besingakhipha iloli nje kuphela emgwaqweni isikhathi esingaphansi kwenyanga ekuqaleni konyaka, ngakho ozakwethu kwakumele bakwazi ukushesha ngokushesha ukufaka nokukhokhisa. ”
Cabanga Ukuxhumana ikwazile ukuhlangabezana nezidingo. Ingqalasizinda entsha yakhiwe eduzane ne-Platinum ™ IP3 router. Ku-chassis eyodwa ye-15RU, le router ihlinzeka ngokushintsha okuphezulu kakhulu kwe-SDI yanamuhla-HD amasiginali. Futhi iyakwazi ukuhlanganisa ngaphandle komthungo ividiyo engacindezelwanga i-IP, ngakho-ke ilungele ukwakha isisekelo sokufudukela ekuxhumeni kwe-IP - ngokwesibonelo, ukwethula I-Ultra HD amasiginali. Ku-unit 14, i-Platinum IP3 router nayo ifakwe amakhadi we-multiviewer wePlatinamu, ingeza ukusebenza ngenkathi inciphisa ukuhlala kwabantu abasebenza ngokweqile nokusebenzisa amandla.
I-imagine's Magellan ™ SDN Orchestrator inikezela ngokulawulwa kohlelo lonke elolini. Kuklanyelwe ngqo ukuhlinzeka ngezindawo zokuxhumana ezihlanganisiwe endaweni eyi-hybrid, okwenza ukuthi kube lula ukuguquka phakathi kobuchwepheshe bendabuko, obuxhunyaniswe nge-SDI nobuchwepheshe besoftware obuchaziwe, izakhiwo ezixhumene ne-IP.
"Ubukhulu befreyimu encane bufanelwe kahle elolini, kodwa okwenze kwaba yisinqumo esihle kithi yi-multiviewer ehlanganisiwe," kusho uThoelen. “I-multiviewer nayo ivumelana nezimo kakhulu kunesethi yethu yokuqapha yakudala. I-unit 14 ingahle yenze ibhola ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo nangeSonto, bese kuba nezokuzijabulisa namakhonsathi phakathi nesonto, ngakho-ke kudingeka sishintshe ukucushwa njalo. Singakwazi ukusetha ama-piP amaningi njengoba sidinga noma yini umqondisi ayifunayo. ”
"Lokhu bekuyiphrojekthi edinga ukusebenzisana okuningi," kusho uMathias Eckert, SVP & GM EMEA / APAC, Playout & Networking, Cabanga Ukuxhumana. “I-NEP yinhlangano enamakhono amakhulu nephrofeshinali, futhi ibikwazi kahle ukuthi ibifunani. Iqembu lethu lokuklama, ukuhlanganisa kanye nokusebenzisa - elihlanganisa abasebenzi bendawo abasebenza nabalingani bethu i-VP Media Solutions - babenamakhono wokuthola izidingo zabo.
"Ukusebenza okuyisisekelo kwePlatinamu yethu i-IP3 kanye ne-Magellan SDN Orchestrator sekufakazelwe - kwizicelo zokusakaza ngaphandle, kanye neziza ezibekiwe - iminyaka eminingana, ngakho-ke sikwazile ukuhlangabezana nezidingo ze-NEP zisuka eshalofini, ”Wanezela. "Ngokubambisana, Cabanga ne-NEP bethule ubuchwepheshe obuvuselelwa ngesikhathi esifushane kakhulu."
Abakwa-unit 14 bathathe amasonto amahlanu besendleleni babuyela emsebenzini beyokhombisa ikhonsathi yeLadies of Soul e-Amsterdam. Umsebenzi wokufaka wawenziwa ezindaweni zokusebenzela ze-NEP eRotselaar, enyakatho-mpumalanga yeBrussels.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana Cabanga Ukuxhumana'imikhiqizo nezixazululo, sicela uvakashele www.imaginecommunications.com
Mayelana Cabanga Ukuxhumana
Cabanga Ukuxhumana kunika amandla imboni yezokuxhumana nezokuzijabulisa ngokusebenzisa imishanguzo yokushintsha. Abasakazeli, amanethiwekhi, abahlinzeki bevisi yevidiyo kanye namabhizinisi emhlabeni wonke bancike ekusebenzeni kwethu okuhle, okuzayo, amavidiyo amaningi nezinzuzo zokuthola imali nsuku zonke ukusekela imisebenzi yabo ebalulekile. Namuhla, cishe izingxenye zezingxenye zevidiyo zomhlaba zihamba ngemikhiqizo yethu, futhi izixazululo zethu ze-software ziqhuba eduze kwesithathu senzuzo yemali yomhlaba jikelele. Ngokusebenzisa amasha okuqhubekayo, sinikeza i-IP ephambili kakhulu, i-cloud-enabled, inethiwekhi echaziwe software kanye nezixazululo zokusebenza embonini. Vakashela www.imaginecommunications.com ukuze uthole olunye ulwazi, futhi silandele ku-Twitter @imagine_comms.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe ubuchwepheshe obuyinhloko ikusasa-ubufakazi UGeert Thoelen Cabanga Ukuxhumana Ukuhlanganiswa Ukuxhumana kwe-IP Mathias Eckert Ama-Marcomms we-MKM Ukuxhumana kweMKM Marketing I-NEP Belgium Iloli le-OB Ukusakaza Ngaphandle Ama-spears nama-Arrows Ubuciko obuphezulu ukulungisa kabusha iloli Unit 14 Umlingisi wevidiyo I-VP Media Solutions	2019-11-06
Ngaphambilini: I-CEntrance Ships Professional Field Recorder nge-Stereo Mics
Olandelayo: I-AfricaCom ibona i-Simplestream ikhombisa indlela esebenza kahle kakhulu kumasevisi wevidiyo yesizukulwane esilandelayo